Roa tokom-bolana nitantanana an’Antananarivo. Tsy maintsy tanisaina izay novantanina : tsy mba hady levenambola anefa fa hady fota-nandry dimampolo taona. Latsaka ambany dia ambany tokoa ny Renivohitr’i Madagasikara. Simba ny tanàna, simba ny toe-tsaina.
Na iza na iza, ka tia an’Antananarivo, tsy afaka ny ho faly hoe «niverina sahady ny mpivarobarotra amoron-dalana, niverina ny mpitarika posy sy sarety, niverina ny mpandoto tanàna samy hafa».
Misy fanoherana ve ny fitiavana an’Antananarivo ? Zanak’i Ranona, mpomba an-dRanona, fa zanak’Antananarivo aloha no voalohany indrindra. Raha tsy izany mialà teto dia misafidiana toeran-kafa honenana.
Ny «avenue de l’indépendance» feno diky, ny sisin-dalana rehetra maimbo ampy. Ny takela-by ho an’ny fiarakodia tapitra voatsofa. Ny faritra fiampitan’ny mpandeha an-tongotra tsy voahaja. Ny «Arrêt bus» nananganan’ny sasany tsena. Ny fefin-jaridaina nanazahana lamba.
Antananarivo tian-ko honenana, satan’Antananarivo tsy maintsy harahina. Raha tsy izany, mialà teto dia misafidiana toeran-kafa mankasitraka ny korontandava, ny tabataba mandra marain’ny andro, ny fako atsipitsipy anaty tatatra, ny fifamoivoizana tsy mifanaja, ny tsena mibahana vavahadin’olona, ny vato miandry parking, ny trano aorina ambony lakan-drano, ny arabe fanaovana garage, ny hazo ravaky ny kianja ataina ho kitay, ny tanin-panjakana sy lalam-bahoaka hananganana trano sokosoko.
Fitanisana tsy enina. Maro loatra ny fifamotoran-javatra teto ka tsy ho vita iray andro ny hanarina azy hiverina amin’ny laoniny. Toe-tsaina zatra nirorona, hanahirana ny hampisondrotra azy indray. Loham-boto navela nanampatra izay danin’ny kibony tsy ho mora ny hampianatra azy fahalalam-pomba.
Misy eto Madagasikara ve izany tranon’olon-dratsy fidiran’olon-tsy vanona izany ? Tsia. Misy olombelona mba olona ihany ve ka maniry honina anaty fisoko ? Tsia. Misy antoko mandala ny loto, mankasitraka ny maimbo, sambatra amin’ny korontana ? Angamba tsia. Ka fomba ahoana sy saina inona no itehafana raha voatohitra ny fandaminana an’Antananarivo ?!